Silicone banyere ndụ anyị | Honneur
Silicone batara na ndu anyi
Silicone abanyela ndụ anyị n'ụzọ dị iche iche.
A na-eji ha maka ụdị ejiji na akwa akwa. Dịka a na-eji kọlọ na akwa akwa maka akwa, ndị nnọchi anya, akwa akwa, akwa akwa na akwa mmiri. Ọ bụ ezie na eji mmiri na emulsion eme ihe maka ịchacha akwa, akụrụngwa akụrụngwa na ihe enyemaka.
Ihe mkpuchi silicone eji ya na uwe na-eme ka ọ na-ekuru ume ma dị mma. Ezie na ngwa ulo oru dika ugboala, ihe ndi ozo na ngwongwo egwuregwu, ihe mkpuchi silicone na-enye ike, iguzogide oke onodu udu mmiri, udu mmiri, uda UV na oku.
Teknụzụ Silicone enwetawo ewu ewu na ngwa ejiji na nke akwa akwa. N'ihe eji ejiji, silicone textiles nwere ọtụtụ uru. Ọ nwere ike belata shrinkage, free scratch, free wrinkle free, tinye adụ na akwa, nwere elu mmiri repellency. Ihe mkpuchi silicone na-ejide oke nke akwa ahụ ma ọ naghị esi ike na oyi ma ọ bụ ire ere mgbe ekpughere ya okpomoku dị elu.
Silicones dị mfe ịhazi ma n'ihi ya na-eri ọnụ ahịa. Enwere ike ịhụ silicones dị ka resins free, mmiri na-adịghị agbanwe agbanwe, gels, roba, ntụ na mmiri dị nro karịa mmiri ma ọ bụ oké dị ka tapawa. Site n'ụdị silikone ndị a, a na-emepụta ma na-emepụta ngwaahịa silicone na-enweghị atụ n'ụwa niile maka nzube dị iche iche na akwa.
Oge nzipu ozi: Jul-16-2020